အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ကျွမ်းကျင်မှု တိုးတက်စေမည့် နည်းလမ်း (၇၀) - အပိုင်း (၁ဝ) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on June 1, 2012 at 11:16 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
၄၆။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ထုတ်လွှင့်တဲ့ ရေဒီယိုသတင်းကိုနားထောင်ပါ။ ပိုလွယ်အောင်လို့ သတင်းကို အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်ထားပြီးမှ နားထောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ သတင်းကို ကြိုဖတ် ကြိုနားထောင်ထားနိုင်ပါတယ်။
၄၇။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ သတင်းစာကို ဖတ်ပါ။ လန်ဒန်မှာ Metro သတင်းစာလို အခမဲ့ရတဲ့ သတင်းစာတွေက ဖတ်လို့ အလွယ်ဆုံး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်တော့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အသုံးအနှုန်း ခက်ခဲမှု အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိတဲ့ Daily Express သတင်းစာ၊ Daily Mail သတင်းစာတွေ ရှိပါတယ်။ The Sun လိုမျိုး လူကြိုက်များတဲ့ သတင်းစာတွေကတော့ မျက်နှာဖုံးသတင်းခေါင်းစဉ်တွေ၊ ဆောင်းပါးတွေမှာ Idiom တွေ၊ ဘန်းစကားအသုံးအနှုန်းတွေ နောက်ပြီးတော့ ဟာသတွေလည်း ထည့်ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ပိုပြီးတော့ ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။
၄၈။ အင်္ဂလိပ်လိုဝတ္ထုရေးပါ။ ဥပမာ ၀တ္ထုတိုရေးနိုင်ပါတယ်။ နေ့တိုင်းဘာတွေဖြစ်ပျက်တယ်ဆိုတာကို နေ့စဉ်မှတ်တမ်းရေးရတာ ပျင်းရိငြီးငွေ့သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးကတော့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းရှိတဲ့အတိုင်း ခေါင်းထဲဝင်လာတာတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ကောင်းကျိုးကတော့ အင်္ဂလိပ်လိုတစ်ခုခုကို ဘယ်လို ပြောရမလဲ စဉ်းစားလို့မရဘူးဆိုရင် ရေးလို့လွယ်တဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို ပြောင်းလဲလိုက်လို့ ရပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ၀တ္ထုစရေးဖို့ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကတော့ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းရေးတာကနေစပြီး အသေးစိတ် အချက်အလက်လေးတွေကို ပြောင်းပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်လာအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ၃ပတ် ၄ပတ် စသည်ဖြင့် အချိန်ကြာလာတာနှင့်အမျှ စိတ်ကူးယဉ်အချက်တွေကို ပိုပြီးတော့ထည့်နိုင်ပါတယ်။
၄၉။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား လေ့ကျင့်ခန်း ဗီဒီယိုတွေကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေ ဘာသာစကား သင်တာနဲ့လည်း ဆင်တူပါတယ်။ နားထောင်၊ စောင့်ကြည့်၊ လိုက်လုပ် ပုံစံ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး အတွက်လည်း ကောင်းပါတယ်။
၅၀။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြောတဲ့ နာမည်ကြီး မိန့်ခွန်း ဒါမှမဟုတ် နာမည်ကြီးကဗျာကို သင်ယူပါ။ အဲဒီထဲမှာပါတဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းအတိုင်း အတိအကျပြောဖို့ အခွင့်အလမ်း ရချင်မှ ရပါမယ်။ အဲဒီလို ပြောတာလည်း ကြားချင်မှ ကြားရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ခေါင်းထဲမှာ မှတ်သားဖွယ်ရာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ သဒ္ဒါအသုံးအနှုန်းပုံစံတွေ နမူနာ ရှိထားခြင်းအားဖြင့် အခြား သဒ္ဒါအသုံးအနှုန်းပုံစံတွေကို ကြားရတဲ့အခါမှာ တတ်ဖို့အများကြီးလွယ်သွားတတ်ပါတယ်။ သဒ္ဒါလေ့ကျင့်ခန်းတွေလောက် ပျင်းစရာမကောင်းဘဲ ထပ်ကာထပ်ကာလည်း လေ့ကျင့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Permalink Reply by Zaw Win on June 1, 2012 at 16:37
Permalink Reply by thae thae htwe on June 2, 2012 at 10:34
Permalink Reply by yeyintmoe on June 3, 2012 at 10:29
Your suggestion is very useful for me. I'm looking forward to your new ways.
Permalink Reply by 1pyurigjonnpu on June 3, 2012 at 15:32
Thank.It will be very useful to me.
Permalink Reply by AshinDamahar Nanda on June 16, 2015 at 5:22